Tracky Train dia manolotra anao hanisy marika ny làlana mba tsy hijanonan'ny lamasinina | Androidsis
Mametraha làlana tsy mijanona mba tsy hivezivezy ny lamasinina amin'ity lalao mahafinaritra antsoina hoe Tracky Train ity
Crossy Road nanokatra ny vanim-potoana ho an'ny fomba fahitana tena manaitra ao anatin'inona ireo sary mihetsika pixelated sy ireo endrika toratelo manome endrika tena miavaka. Ny iray amin'ireo kalitaon'ity fiteny famolavolana ity dia ny tsy fanerenany sary an-tsary ny finday avo lenta, noho izany ny fanjifana bateria dia tsy mihoa-pampana ary miaraka amin'izay dia afaka maneho hatsarana hita maso lehibe izy. Noho io antony io indrindra no ahitantsika lalao video marobe hatrany amin'ny fomba Crossy Road. Izay nitaona ny saina dia nanahaka koa matetika, ka tsy gaga mihitsy isika mahita lalao maro hafa amin'ny fomba mampihomehy izay tsy maintsy anampiantsika ny biby isan-karazany hiampita ny arabe.
Tonga izao ny Tracky Train, lalao video izay mirehareha amin'ny fomba fahita mahafinaritra ary aingam-panahy avy amin'ilay voalaza teo ihany. Ao amin'ny Train Tracky dia mila mametraha lalana tsy mijanona amin'izay ny fiaran-dalamby ho avy ao aorianao dia afaka manohy ny lalany ary haka ireo mpandeha miandry amin'ny faritra samihafa hisokatra rehefa mandalo isika. Hetsika iray mahaliana ho an'ny lalao iray izay tsy elaela tao amin'ny Play Store, saingy manana an'io zavatra manokana io izay misarika ny sain'ny mpilalao mahay fotoana. Lalao video iray izay manangona antsipiriany sasany ihany koa toy ny tontolo feno loko ary amin'ny alalany avy amin'ny fiaramanidina mankany amin'ny balaonina rivotra mafana mba hamelomana kokoa ireo lalao lalaovintsika.
1 Mariho ny lalana mankany amin'ny lamasinina
2 Mpandeha malaza 100 mahery
Mariho ny lalana mankany amin'ny lamasinina
Tracky Train manolotra a gameplay mahafinaritra izay tsy maintsy itarihantsika ny masinina mametraka ny làlana amin'ny tany. Ny fiafaran'ny lalao dia rehefa mifandona amintsika ny lamasinina satria tsy afaka mametraka lalamby bebe kokoa hanaraka ny lalany isika, koa tokony hitandrina isika mba hisorohana ny sakana ary handray ny lamasinina ho an'ireo mpandeha horaisin'izy ireo. Aorian'ny fametrahana ny lalamby tsara, dia hanana ny safidy farany izahay amin'ny fitondrana ny lalam-by ho any amin'ny gara mba hahafahanao mampidina ireo mpandeha izay nanao dia ary te-hahatakatra ny toerana alehany.
Amin'ny maha lalao tsara azy io, dia manome fahasamihafana tsara ao amin'ny karazana maotera sy sarety samihafa, noho izany mamporisika anao hanohy hilalao azy io ary hamaha izany atiny izany. Zavatra ilaina amin'ny lalao amin'ity fomba ity izay tsy hiova ny filalaovana, na dia mijery ny antsasak'izao tontolo izao aza isika. Crossy Roads sy ny hafa dia milalao amin'ireto karatra ireto mba hanomezana fialan-tsiny ho an'ilay mpilalao hanohy ny fiankinan-doha amin'ny lalao tiany. Eto dia tsy lavitra any aoriana ny Tracky Train.
Mpandeha malaza 100 mahery
Ankoatra ireo karazana maotera sy sarety 12 samihafa, dia asongadin'ny Tracky Train Tontolo iainana miloko 5 ary manana mpandeha malaza maherin'ny 100 izay tsy maintsy entinao mankany amin'ny toerana alehany any amin'ny gara. Lalao iray izay ahafahanao manova ny làlan-kaleha amin'ny alàlan'ny swipe mba tsy hianjera amin'ny fotoana rehetra, satria midika izany fa hifandona amin'ny fiaranao ny lamasinina, hamarana ny lalao.
Lalao video mahavariana amin'ireo singa samihafa ary ahafahanay manome tsiny izany tsy manana fampisehoana tsara indrindra azo atao. Izy io dia manana jerks sy lag lag kely, ary manome ahy izany fa noho ny tsy fisian'ny fanatsarana amin'ny alàlan'ny fanolorana karazana sary marobe rehefa milalao azy ianao. Ho olana amin'ny fanavaozana azy tsara ity mba hanolorana ny fampisehoana tsara indrindra hilalaovana lalao mahafinaritra sasany.
Azonao ilay izy maimaimpoana avy amin'ny Google Play Store miaraka amin'ny micropayments ao anatin'ny fampiharana.
Gaga amin'izany fomba fahitana izany ary feno loko ny tontolony indraindray ny antsipiriany dia manery antsika hanisy tombo-kase amin'ny lamasinina. Ireo tontolo samihafa dia manana kalitao lehibe ary mampiseho izany fa nametraka fitiavana be dia be izy ireo mba hitondranay traikefa lalao video iray manontolo. Manantena aho fa afaka mamoaka ireo sisin-tany mifandraika amin'ny fampisehoana satria hanana andiany folo ianao.
Tsy misy fampisehoana
Developer: Ny sandan'ny anjara Crash Lab Limited
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mametraha làlana tsy mijanona mba tsy hivezivezy ny lamasinina amin'ity lalao mahafinaritra antsoina hoe Tracky Train ity
Saka Paris izay mitsambikina avy eo ambony tampon-trano ka hatrany an-tampon-trano ao Paname
Lineage War, MMO tsara izay mampiakatra ny kalitaon'ny karazana amin'ny Android